Ihowuliseyili i-48V 750W enamandla amakhulu e-Verstile Fat tire Electric Cargo Bike yoMvelisi kunye noMthengisi | IIMI
48V 750W Super enamandla Verstile Fat ukudinwa Electric Cargo Bike
Ibhayisekile ehamba ngemithwalo enezixhobo zombane ezinezibane, izibane ezihlanganisiweyo, izibuko lokutshaja i-USB, kunye nomqolo omkhulu ongasemva oxwesileyo. Inesiqu esinokuhlengahlengiswa ukuphucula ukulunga, isebenzisa iivili ezingama-24, ngasemva ezenza ukulayishwa kube lula kodwa zibe zisinika intuthuzelo elungileyo, kwaye inokhetho lwebhetri ezimbini zoluhlu olwandisiweyo!
Inkqubo yombane intle ngokwenyani, Inika i-motor ye-750 watt 85nm enamandla ngakumbi, inokoyisa naphi na apho uthanda khona, kwaye ineebhuleki ezihamba ngesanti kubunzulu baphantsi ngoku ngokuchasene noomatshini. Isanikezela ngenkxaso yokuhamba ngenyawo kunye nemowudi yokuhamba, kodwa ukugqwesa ngaphezulu kukunceda ngamandla apheleleyo!
Isakhelo esenziwe ngokutsha sihle, songeza ukuqina, kwaye senza ukuba iibhetri zibe lula ukufikelela kuzo, kodwa oku kuyayinyusa ityhubhu ephezulu kancinci (ukuma okuphezulu). Amanqaku okuncamathela azinikeleyo enza kube lula ukuncamathisela kunye nokutsala itreyila.
Ukuzinza okuphezulu okuzinzileyo kwemilenze emibini kunye ne-deflopilator spring kwenza kube lula ukuyilayisha nokukothula. Amavili akude aphucula ukhuseleko. Iibhotile ezimbini zeebhotile kunye nentaba yentloko yokufaka intambo yongeza ukusebenziseka kunye nokusebenza ngokuchaseneyo.
Ubeko olutsha lweRack Rack
I-E-BOOST ikwi-rack e-aluminium ene-alloy emitsha eguquguqukayo, ixhasa abantwana, imithwalo, ufakelo lwebhasikithi. kuthelekiswa kakhulu nabanye abathengisi be-OEM.
Isixhobo sesandla esijingayo kunye neLcd Display
Isebenzisa i-handtem yomgangatho ophezulu, kunye nesiqu esinokuhlengahlengiswa, abakhweli banokuhlengahlengisa ukuphakama kwizandla zakhe ezifanelekileyo. Ukukhwela ngokukhululekileyo kukusukela kwethu. Ububanzi be-31.8mm bubungakanani obuqhelekileyo apho wonke umkhweli anokufikelela nakweyiphi na indawo.
Umboniso weLCD uneendawo ezi-5 zokuxhasa ezinokuthi zisebenze ngokulula ngamaqhosha amabini. Umboniso ukhanyisiwe kwaye kulula ukusebenza. Ngokucinezela iqhosha ungafunda ulwazi oluninzi, njengesantya, umgama kunye nokusetyenziswa kwebhetri. Inkxaso iyema ngesantya esingaphezulu kwe-45 km ngeyure. Oku kugqitywe ngokusemthethweni. Umboniso unonxibelelwano lwe-USB ngasemva.
Ibhasikithi engafakwa ngaphambili
Ibhasikithi engaphambili enokuncamatheliswa yenye indlela yokongeza izinto ezingaphezulu kwibhayisikile yemithwalo, umthwalo omkhulu yi-10KGS, kwaye unokubeka ibhegi yesikolo, iintyatyambo, ikofu kuyo. Umbala wayo 100% utshatisa umbala wesakhelo.
I-48V 13Ah ibhetri yeselfowuni ilinganiswe ngexabiso le-500.
I-56V, 2 Amp itshaja efanelekileyo, isebenza kwiivenkile zamandla ze-100V-240V AC
Umlawuli oSebenzayo 48V 23Ah ngokhuseleko
Igama le-750 Watt, iTorque 85NM
Prowheel, zakha ingxubevange, 170mm Ubude, 42 Ukubola Steel Chainring kunye Plastic Guide
Yakha isiqwenga somxube wentsimbi esinye
IsiKenda 26 * 4.0
Egqithileyo I-20inch efihliweyo yeBattery Light Light Electric Bike Bike
Okulandelayo: I-48V 1000W enamandla e-Carbon Fibre yombane wamafutha iTire Bike yeNtaba